Iindaba -Ungaba njani yiNgcaciso yeNkqubo yoMatshini we-CNC
Ungaba njani yiNgcaciso yeNkqubo yoMatshini we-CNC
Kulabo babandakanyekayo umatshini, ukuphucula amandla abo okusebenza kubalulekile ukuba bafunde inkqubo yomatshini we-CNC. Ukuze ube yinkosi ye-CNC (iklasi yokusika isinyithi), kuthatha iminyaka emi-6 ubuncinci ukusuka kokuphumelela eyunivesithi. Kuya kufuneka abe nenqanaba lethiyori yenjineli kunye namava asebenzayo kunye nezandla zokukwazi ukusebenza kwegcisa eliphezulu.
Okokuqala kufuneka ube yingcibi ebalaseleyo.
Umatshini CNC idibanisa ukubhola, wokugaya, uyadika, ukuguqula, ukuthepha kunye nezinye iinkqubo. Ubuchule bokufunda ngomsebenzi wengcibi buphezulu kakhulu. Inkqubo ye-CNC yinkqubo esebenzisa ulwimi lwekhompyuter ukwenza inkqubo. Inkqubo sisiseko senkqubo. Ukuba awuqondi ubugcisa, awunako ukuyibiza ngokuba yinkqubo.
Ngokufunda ixesha elide kunye nokuqokelela, le migangatho ilandelayo yobugcisa kunye neemfuno kufuneka zifezekiswe:
1.Ukuqhelana nolwakhiwo kunye neenkqubo zenkqubo yokomba, ukugaya, ukukruqula, ukugaya kunye noomatshini bokucwangcisa.
2.Ukuqhelana nokusebenza kwenkqubo izixhobo.
Ulwazi oluqinileyo lwethiyori esisiseko yesixhobo, yazi kakuhle isixa sokusika esiqhelekileyo sesixhobo.
4.Ukuqhelana nenkqubo yenkqubo yenkcazo, izikhokelo kunye neemfuno ngokubanzi ezinokufezekiswa ngeenkqubo ezahlukeneyo, kunye neendlela zenkqubo yamacandelo aqhelekileyo. Ukusetyenziswa kwezinto ezifanelekileyo kunye nenani leeyure zokusebenza.
5.Qokelela inani elithile ledatha kwizixhobo, izixhobo zoomatshini, nakwimitshini. Ingakumbi uqhelene nenkqubo isixhobo izixhobo umatshini CNC.
6.Yazi ngokukhetha kunye nokugcinwa kwesipholisi.
7.Ukuba nokuqonda okuqhelekileyo kweentlobo zomsebenzi ezinxulumene noko. Umzekelo: ukulahlwa, ukulungiswa kombane, unyango lobushushu, njl.
8. Yiba nesiseko esihle.
9.Ukuqonda iimfuno zebandla kunye nokusetyenziswa kweenxalenye zomatshini.
10. Yiba nesiseko esihle sobugcisa bemilinganiselo.
Kwangelo xesha, kuya kufuneka ubenobuchule kwinkqubo ye-CNC kunye nokusetyenziswa kwesoftware yekhompyuter.
Nangona kukho imiyalelo emininzi yenkqubo, iinkqubo ezahlukeneyo ziyafana. Ihlala ithatha iinyanga ezi-1-2 ukuba iqheleke. Isoftware ezenzekelayo yinkqubo enzima ngakumbi kwaye ifuna ukufunda. Kodwa kubantu abanesiseko esihle seCAD, akukho nzima. Ukongeza, ukuba yinkqubo yesandla, uhlalutyo lwesiseko sejiyometri kufuneka luqheleke. Ukuziqhelanisa, umgangatho wenkqubo elungileyo yile:
1.Easy ukuqonda, zilungelelaniswe.
Imiyalelo embalwa kwicandelo lenkqubo ingcono. Ilula, iyasebenza, kwaye ithembekile.
3.Easy ukulungisa. Kungcono ukuba ungatshintshi inkqubo xa ukuchaneka koomatshini kwenxalenye kufuneka kulungiswe kakuhle. Umzekelo, ukuba isixhobo siphelile, ukulungelelanisa, tshintsha nje ubude kunye ne-radius kwitafile ye-offset.
4.Easy ukusebenza. Inkqubo kufuneka ihlanganiswe ngokweempawu zokusebenza kwesixhobo somatshini, esiluncedo ekuqwalaselweni, ekuhlolweni, kumlinganiso, kukhuseleko, njl. Umzekelo, kwinxalenye efanayo, umxholo ofanayo wokuqhubekeka uqhubekeka ngokwahlukeneyo kwiziko lokumisa nkqo kwaye iziko machining oxwesileyo, kwaye inkqubo yahlukile ngokuqinisekileyo. Ukulungiswa koomatshini, eyona ndlela ilula yeyona ndlela ilungileyo.